Fikarohana momba ny firaisana Ny tantaram-piainana taloha tamin'ny fisainana ara-panahy, ny fiainana taloha sy ny fitondran-tena: ny tranga fanakisan-tena silamo an'i Abdulkerim Hadduroglu | Necati Caylak - Fikarohana Reincarnation
Tantaram-piainana taloha niaraka tamin'ny fanahy, fiainana taloha Phobia & fitondran-tena: Trangam-panjakan'olom-belona ao amin'ny Abdulincim Hadduroglu | Necati Caylak
Mpikaroka: R. Bayer sy Ian Stevenson, MD
From: Ireo tranga avy amin'ny karazana virijiny: Boky III, Roambinifolo roa ao Libanona sy Torkia, avy amin'i Ian Stevenson, MD
Ny fiainan'i Abdulkerim Hadduroglu & fahafatesan'ny fianjerana Minibus
Abdulkerim Hadduroglu dia teraka tany Cekmece, vohitra akaiky Antakya, ao amin'ny 1934. Niaina ny ankamaroan'ny fiainany tao Bedirge, izay avaratr'i Antakya. Ny tanàna iray hafa ao amin'ilay faritra dia Karaali, izay misy 8 kilometatra atsimon'i Bedirge. Ireto toerana rehetra ireto dia anisan'ny faritany atsimo amin'ny faritr'i Tiorka Hatay.
Mpamboly i Abdulkerim ary teo amin'ny làlambe ny taniny. Abdulkerim dia nanambady vehivavy antsoina hoe Surevya, avy any Arsus, izay nanana zanaka telo. Mbola bevohoka indray izy tamin'ny fotoana nahafatesan'i Abdulkerim.
Abdulkerim dia Miozolomana iray izay nandinika nandritra ny volana haingana Ramadany, izay mitaky ny tsy fisian'ny fisotroan-dronono. Ramadan dia manaraka ny andro fialantsasatra faharoan'ny Seker Bayram, izay hankalazain'ny silamo sasany amin'ny alàlan'ny alikaola. Tamin'ny febroary 26, 1963, Abdulkerim nankalaza ny Seker Bayram tany Antakya niaraka tamin'ny namany tamin'ny fisotroana raki, zava-pisotro misy alikaola natao tany Torkia.
Taorian'ny Ramadam, Abdulkerim Drinks Raki
Rehefa naneso i Abdulkerim sy ny namany, dia nangataka namana iray, Cevri Simsek, izy ireo mba hitondra azy ireo hody. Ny vondrona, izay ahitana an'i Abdulkerim, Suphi Elmas, Huseyin Yenoicak ary Abdulgani Kizildag, dia niditra tao amin'ny Fiat minibus niaraka tamin'i Cevri teo amin'ny kodiarana. Ny roa tamin'ireo mpiboboka toaka, Hasan Bereket sy Remzi Simsek no nijanona.
Abdulgani Kizildag dia nangataka ny hiverina any amin'ny toeram-pitrandrahana arintany izay niasany. Rehefa avy nandao azy izy ireo, dia nandeha nankany Bedirge ny vondrona. Tahaka ny nanatonan'ny minivanina ny tetezana tao Karaali, kamiao iray dia tonga avy any amin'ny làlana hafa miaraka amin'ny jiron'ny lanjany ambony. Ny jiro dia nanajamba an'i Cevri izay nandeha teny amin'ny sisin'ny lalana ary namely ny rindrin'ilay tetezana. Ny minibus dia nandrakotra ary nijanona teo amin'ilay dian-drano teo ambany tetezana.
Nipetraka teo akaikin'ilay mpamily i Abdulkerim. Miaraka amin'ny fiantraikan'ilay fiankinan-doha, dia nokapohina tamin'ny endriky ny fiara izy, ny hery nahatonga ny kirarony iray hanidina. Abdulkerim dia novonoina avy hatrany. Araka ny nomarihan'ny daty dia ny Febroary 26, 1963. Ny mpamily, Cervi, dia naratra mafy, nogadraina nandritra ny telo andro ary nafindra tany am-ponja. Nandalo fitsarana izy taorian'izay, satria nitondra fiara sy fiara tsy mataho-dalana, nefa tsy nisy naninona.
Fahatsiarovana ny fiainany taloha: Necati Caylak dia mahatsiaro ny fiainany taloha sy ny fahafatesan'i Abdulkerim Hadduroglu
Necati Caylak teraka tao 1963 tao amin'ny tanànan'i Karaali, tokony ho iray volana taorian'ny nahafatesan'i Abdulkerim tao amin'ilay fianjerana. Ny ray aman-dreniny dia Mikdat Caylak sy Zekiye vadiny.
Rehefa roa na telo taona izy dia nanomboka niresaka momba ny fiainany taloha i Necati. Ny fanambarany voalohany dia nanondro ny nahazoany saha teo akaikin'ny làlambe. Nolazainy fa avy any Bedirge izy talohan'ny nahatongavany ho nofo.
Nilaza i Necati fa novonoina teo amin'ny tetezana Karaali izy rehefa nokapohina ny tetezana rehefa niverina avy any Antakya ka hatrany Bedirge. Nilaza izy fa efa nisotroany alohan'ny loza izy ary nitranga tamin'ny fialan-tsasatry ny Silamo. Necati dia nanamarika mazava fa ny fiara liana dia minibus ary nahafoy ny kiraro izy tamin'ny fianjerana.
Fahatsiarovana ny fiainany taloha: Ncati dia manondro ireo mpanararaotra taloha tany amin'ny Minibus
Necati dia nantsoina hoe Cevri sy Abdulgani raha teo an-dalam-be niaraka taminy, ary niasa tao amin'ny tobin-tsolika iray i Abdulgani. Nolazainy fa nangalatra ilay minivana, izay ampahany marina, satria ny minivan dia nalaina tsy nahazoan-dalana avy amin'ireo tompony.
Necati nanamarika i Remzi ho namana hafa ao amin'ny minibus. Raha ny marina, i Remzi dia tafiditra tao anatin'ny vondrona izay nisotro raki tamin'ny alin'ny loza, saingy i Remzi dia navela hody ary tsy nandeha tamin'ny minibus. Nanambara i Necati fa nijanona ho mpiasan'ny minvan ihany i Ferrac, saingy raha ny marina, i Ferrac dia tompon'ny minivanina izay tsy nandray anjara tamin'ilay loza. Tsy nahalala an'i Suphi Elmas sy Huseyin Yenoicak ho mpitsoa-ponenana hafa tao amin'ilay minibus i Necati.
Ho setrin'izany, napetrak'i Necati ny famaritana mazava momba ilay fianjerana, tamin'ny nilazany fa nitranga tao amin'ny minivanina teo amin'ny tetezana tao Karaali ary nahafatesana kiraro tamin'ny loza. Nanao fanambarana maromaro ihany koa izy mikasika ny mpitsoa-ponenana ao amin'ny minibus, dia ny hoe i Cevri sy Abdulgani dia nandeha tany amin'ilay fiaramanidina talohan'ny fianjerana, saingy nisafotofany anarana sy tsipiriany vitsivitsy momba ireo mpandeha.
Ny fianakavian'i Necati dia naheno momba ilay fianjerana tao amin'ny Bridge Bridge Karaana, izay iray volana monja talohan'ny nahaterahan'i Necati, saingy tsy nahalala ny antsipiriany mikasika ireo olona tafiditra tamin'ilay loza. Noho izany, tsy afaka ny nomeny an'i Necati izy ireo dia ny antsipiriany rehetra mikasika ny mpitrandraka ny minivanina.
Fiainana taloha Phobia: ny tahotra an'i Necati amin'ny fiampitana ny tetezana izay nahafatesan'i Abdulkerim
Rehefa roa taona ka hatramin'ny telo taona i Necati dia nandeha nidina teny amin'ny làlambe izy sy ny zokiny lahy rehefa tonga teo amin'ny tetezana tao Karaali, izay nahafatesan'i Abdulkerim. Rehefa nahita ilay tetezana i Necati, dia nanjary nanahy be izy ary nanomboka nitomany.
Rehefa nanontaniana ny antony nitomaniany izy, dia nilaza tamin'ny rahalahiny i Necati fa novonoina tamin'ny lozam-piarakodia izy. Nilaza izy fa namoy ny iray tamin'ny kirarony izy tao anatin'ilay fianjerana. Tsy nety niampita ny tetezana i Necati ary naniry ny hahita fomba hafa hiampitana ny renirano kely ambanin'ilay tetezana.
Ian Stevenson dia nanamarika fa ny rivo-doza tao amin'ny tetezan'i Necati dia naharitra taona maromaro, ary vao mainka niharatsy rehefa tonga folo taona izy. Nanan-tany koa i Necati, ary nandeha fiara izy ireo.
Nisy fanehoan-kevitra toy izany koa teo amin'ny fanandramana ny tahotra tany amin'ny toerana iray Rashid Khaddege | Daniel Jurdi, izay notadiavin'i Ian Stevenson, MD. Rashid dia maty tamin'ny fianjeran'ny fiara tamin'ny toerana iray antsoina hoe Military Beach, any Libanona.
Toy ny zazakely, i Daniel dia tao anaty fiara izay nentin'ny reniny. Raha tonga teo amin'ilay toerana teny an-dalana antsoina hoe Military Beach ry zareo dia kely dia nanomboka nitomany i Daniel. Rehefa nanontany ny antony nitomaniany ny reniny, dia nilaza i Daniel fa maty teo amin'io toerana io izy tamin'ny fiainany teo aloha. Tahaka an'i Necati, Daniel ihany koa dia nanana fiara feno fiara, na dia nilaza aza i Stevenson fa voafetra ny fiara fitaterana haingana i Daniel.
Ny Rashide Khaddege | Ny raharaha Daniel Jurdi dia tena manan-danja, satria manaporofo izany Ny endriky ny endriky ny endriky ny endriky ny endriky ny fifandraisana amin'ny hafa.
Fahatsiarovana ny fiainana taloha: Ncati dia manondro ny fiainan'ny fianakaviana taloha
Taorian'ny fihetseham-pony tamin'ny tetezana iray Karaali dia nanome tsipiriany fanampiny momba ny fiainany taloha i Necati. Nilaza izy fa Abdulkerim no anarany. Nilaza i Necati fa nantsoina hoe Sureyya ny vadiny, avy any Arsus. Nilaza izy fa nanan-janaka lahy antsoina hoe Mehmet sy Ali, ary zanakavavy iray atao hoe Enver, izay mety ho nanandrana niteny hoe Munnever. Taty aoriana, rehefa nihaona tamin'ny vadin'i Abdulkerim izy, dia nilaza taminy fa ny anaran'ilay zanany dia Munnever.
Nilaza ihany koa i Necati fa ny reniny dia nantsoina hoe Fatma nandritra ny androm-piainany taloha, Katif ny anabaviny ary nanana nenitoany antsoina hoe Meryem izy. Tena marina ireo fanambarana ireo.
Nilaza izy fa nisotro toaka izy tamin'ny fotoana nianjeran'ilay fianjerana. Nolazaina fa diso i Necati tamin'ny voalohany fa nitondra fiara izy. Taty aoriana, nilaza izy fa i Cevri no nitondra ny fiara. Nanampy i Necati fa tsy tokony hitondra fiara i Cevri, raha nisotro.
Fanahy Masina: Abdulkerim Hadduroglu Mandinika ny zava-nitranga taorian'ny nahafatesany
Nilaza i Necati fa ny vadiny dia efa teraka talohan'ny nahafatesany. Sureyya dia bevohoka tamin'ny fotoana nahafatesan'i Abdulkerim ary niteraka zaza hafa izy taorian'ny nahafatesany. Ny fahalalan'i Necati milaza fa nanafaka zaza i Sureyya taorian'ny nahafatesany dia midika fa ny fanahin'i Abdulkerim dia afaka nanara-maso ireo olon-tiany tamin'ny tontolon'ny fanahy. Io trangan-javatra io dia voamarika amin'ny tranga maro ao amin'ny vatana vaovao, izay ankatoavina ao amin'ny fizarana mitondra ny lohateny Ny Fanahy dia ny fandraisana anjara amin'ny trangan'aretina ao amin'ny vatana.
Fifandraisana amin'ny fiainana teo aloha: Nifanaraka tamin'ny fiainany taloha sy ny fianakaviany i Necati
Sureyya Hadduroglu, ilay maty vady navelan'i Abdulkerim, naheno momba ny filazan'i Necati fa maty tamin'ny lozam-pifamoivoizana teo amin'ny tetezana Karaali. Tamin'ny fararano 1966, telo taona sy tapany taorian'ny loza, fony i Necati efa tokony ho telo taona sy tapany dia tonga nitsidika an'i Necati i Sureyya. Nentiny niaraka tamin'ny dadatoany dadan'i Abdulkerim, Hasan Sufi Hadduroglu, ary roa tamin'ireo naman'i Abdulkerim, ireo Zeyneb sy Ahmet Adahi mirahalahy.
Rehefa nivory daholo ireo mpitsidika, dia nitondra an'i Necati tao amin'ilay efitrano ny rahalahin'i Necati ary nanontany azy hoe: "Iza io vehivavy io?" (1)
Namaly i Necati, "Sureyya." (2)
Sureyya dia tsy nanana afa-tsy Necati kely teo amin'ny lohaliny. Nanontany izy avy eo hoe: "Iza aho?" (3)
Naka avy eo i Necati hoe: "Ianao no vadiko." Avy eo dia nanampy i Sureyya fa zanakavavin'ny dadatoany taloha izy, izay marina. (4)
Rehefa nanontaniana hoe iza moa i Hasan Sufi Hadduroglu, dia namaly i Necati fa anisan'ny dadan'ny dadatoany taloha izy. Fantatra ihany koa ny anaran'i Necati amin'ny anaran'i Zeyneb sy Ahmet Adahi.
Ny famantarana an'i Necati dia nampahafantarin'i Sureyya fa i Necati dia ny fiverenana indray ao amin'ny vatana vaovao, Abdulkerim. Ny fijoroan'i Necati ho marina ny fametrahan'ny fianakavian'i Abdulkerim dia nitondra an'i Sureyya nitomany.
Hoy i Sureyya avy eo tamin'i Ncati: "Ahoana no ahafahanao mandao an'i Sureyya?" (5)
Namaly i Necati hoe: "Fa ianao kosa dia Sureyya." (6)
Fahatsiarovana ny fiainany taloha: Ncati dia mamaritra ny fiainan'ny fianakaviana taloha tany an-tranon'ny vadiny taloha, Sureyya
Nanasa an'i Necati sy ny rainy tany an-tranony i Sureyya mba hamangy azy sy ny zanany. Ao, ny rafozan-dRamatoa Sureyya, izany hoe rain'i Abdulkerim Hadduroglu, dia naka an'i Necati teny an-tsandriny ary nampiseho sary azy teny amin'ny rindrina ary nanontany hoe: "Iza io?" (7)
Nijery ny sary i Necati ary namantatra ny tenany tamin'ny fomba niainany taloha, Abdulkerim Hadduroglu, ary ny rahavavin'i Abdulkerim, Katif.
Tao amin'ny tranon'I Sureyya, Necati dia nanondro tamin'ny fomba ofisialy ihany koa i Meryem Haddurouglu, renivohitr'i Abdulkerim. Raha tao an-tranon'i Surreyya izy, dia niditra tao an-trano i Mehmet, zanaka lahimatoan'i Abdulkerim. Rehefa nahita azy i Necati, dia niteny avy hatrany izy hoe: "Ity tovolahy ity no zanako." (8)
Ny fiainana any am-piandohana: kely i Ncati tia an'i Raki ary mamantatra ny fiainany taloha izay misotro toaka ao Karaali
Hasan Bereket, iray amin'ireo olona nisotro raki miaraka amin'i Abdulkerim tamin'ny alina namonoana azy, nahare momba ny fahatsiarovan'i Necati ny maha-teraka indray ao Abdulkerim indray.
Tsy nampoizina fa izy sy ny olon-kafa izay nisotro niaraka tamin'i Abdulkerim tamin'ny andro nahafatesany dia nanapa-kevitra hitsidika an'i Necati. Izany dia nitranga tao amin'ny 1968, fony dimy taona i Necati. Rehefa tonga tany Karaali izy ireo dia nahita an'i Necati.
Naka an-tsitrapo i Hasina hoe: "Oh, how are you, Hasan?" (9)
Nitatitra i Hasan fa nanaiky ireo mpiara-misotro roa hafa i Necati.
Ny tombontsoa, ​​Necati koa dia naneho ny fahalianana voalohany tamin'ny raki.
Phobia avy amin'ny fiainana taloha: Niseho ny tahotra lehibe i Ncati tamin'ny fiampitana ny tetezana tao Karaali, izay nahafaty an'i Abdulkerim Hadduroglu. Nihabetsaka io phobia io mandra-pahafatiny folo taona. Ankoatra izany, natahotra ny nandeha an-kalamanjana i Necati, izay naharitra hatramin'ny fahafito.
Ny Fanahy Mitarika: Ny fahalalan'i Necati fa i Sureyya, ilay vadiny taloha, dia nanolotra zaza taorian'ny nahafatesany dia midika fa ny fanahin'i Abdulkerim dia afaka nitandrina ny olon-tiany tamin'ny sitrapony. Toa azony nodinihina fa ny fitondran'ny vohoka no namarana ny zaza salama.
Fifandraisana vaovao navaozina tamin'ny nateraky ny fanambadiana: Nifamaly tamin'ity fianakaviana sy fiainam-pianakaviana taloha ity i Necati.
Ny fihenam-bidy: Teraka iray volana taorian'ny nahafatesan'i Abdulkerim i Necati. Raha heverina fa tafiditra amin'ny fampandrosoana ny foetus ny fanahy, dia nanaitra ny foiben'i Necati ny fanahin'i Abdulkerim nandritra ny volana 8. Ity fisehoan'ny fanahy iray izay afaka mitoetra mihoatra noho ny vatan'olombelona iray amin'ny fotoana iray dia antsoina hoe fisarahana indray.
Ny tranga toy izany, izay manasongadina ny fampodiana an-tsoratra ary mampiseho ihany koa fa ny endriky ny endriky ny endriky ny endriky ny endriky ny iray dia mety amin'ny fiainana iray manontolo, dia ny raharaha Hanan Monsour | Suzanne Ghamen
1. Stevenson, Ian: Ireo tranga tany am-boalohany: Boky III, Roambinifolo Roambinifolo tany Libanona sy Torkia, University of Virginia Press, 1980, pejy 314
2. Stevenson, Ian: Ireo tranga tany am-boalohany: Boky III, Roambinifolo Roambinifolo tany Libanona sy Torkia, University of Virginia Press, 1980, pejy 314
3. Stevenson, Ian: Ireo tranga tany am-boalohany: Boky III, Roambinifolo Roambinifolo tany Libanona sy Torkia, University of Virginia Press, 1980, pejy 314
4. Stevenson, Ian: Ireo tranga tany am-boalohany: Boky III, Roambinifolo Roambinifolo tany Libanona sy Torkia, University of Virginia Press, 1980, pejy 314
5. Stevenson, Ian: Ireo tranga tany am-boalohany: Boky III, Roambinifolo Roambinifolo tany Libanona sy Torkia, University of Virginia Press, 1980, pejy 306
6. Stevenson, Ian: Ireo tranga tany am-boalohany: Boky III, Roambinifolo Roambinifolo tany Libanona sy Torkia, University of Virginia Press, 1980, pejy 306
7. Stevenson, Ian: Ireo tranga tany am-boalohany: Boky III, Roambinifolo Roambinifolo tany Libanona sy Torkia, University of Virginia Press, 1980, pejy 316
8. Stevenson, Ian: Ireo tranga tany am-boalohany: Boky III, Roambinifolo Roambinifolo tany Libanona sy Torkia, University of Virginia Press, 1980, pejy 317
9. Stevenson, Ian: Ireo tranga tany am-boalohany: Boky III, Roambinifolo Roambinifolo tany Libanona sy Torkia, University of Virginia Press, 1980, pejy 317